EMINEM အမြင့်၊ အလေးချိန်၊ ဇနီး၊ အသက်၊ ရေးရာ၊ - ဟောလိဝုဒ်သရုပ်ဆောင်တွေ
Eminem အမြင့်၊ အလေးချိန်၊ ဇနီး၊ အသက်၊ ရေးရာ၊
နာမည်အမှန် မာရှယ်ဘရုစ် Mathers III ကို
အမည်ပြောင် ကို Double M က, M & M, မာရှယ် Mathers
အလုပ်အကိုင် Rapper, စံချိန်ထုတ်လုပ်သူ, သရုပ်ဆောင်
ကျော်ကြားသည် ကျေးဇူးပြုပြီးထရပ်ပြီးမကြောက်ပါနှင့်။ သင်လိမ်သည့်အတိုင်းချစ်ပါ၊ Mockingbird နှင့် Mosh
ခန္ဓာကိုယ်အတိုင်းအတာ - ရင်ဘတ်: 43 လက်မ
- ခါး: 14 လက်မ
- Biceps: ၃၂ လက်မ
မွေးနေ့ အောက်တိုဘာလ 17, 1972
အသက် (၂၀၁၆ တွင်ကဲ့သို့) ၄၄ နှစ်
မွေးရပ်မြေ St. Joseph, Missouri, US
ဇာတိမြို့ ဒက်ထရွိုက်, မစ်ရှီဂန်, အမေရိကန်
အချစ် အယ်လ်ဘမ် - Infinite (၁၉၉၆)
ရုပ်ရှင် - The Hip Hop စုန်းမ (၁၉၉၆)
မိသားစု ဖခင် - မာရှယ်ဘရုစ် Mathers ဂျူနီယာ (Daddy Warbucks အဖွဲ့ ၀ င်)
အမေ - ဒေဗောရရာနယ်လ်ဆင် (ဒက်ဘီ) (Daddy Warbucks အဖွဲ့ ၀ င်)
ကလေးများ Hailey Mathers
လူမျိုးစု အင်္ဂလိပ်၊ ဂျာမန်၊ စကော့နှင့်ဆွစ်လူမျိုးနွယ်ဖွား
ဝါသနာ သီချင်း၊ သီချင်းနားထောင်ခြင်း၊ ဘောလုံးနှင့်ရုပ်ရှင်ကြည့်ခြင်း
အကြိုက်ဆုံးသီချင်း Busta Rhymes - ကျွန်ုပ်မျက်လုံးများမြင်နိုင်သည့်နေရာတွင်သင်၏လက်ကိုတင်ထားပါ
အကြိုက်ဆုံး Rappers Tupac Shakur၊ Jay-Z နှင့် Dr. Dre
အကြိုက်ဆုံးအစားအစာ Fast Food (Taco's Bell နှင့် Wendy's)
အဓိကအငြင်းပွားမှုများ • Eminem သည်အသက် ၂၀ အရွယ်တွင်ထောင်ချခံခဲ့ရသည်။ သူသည်ပန်းချီကားတစ်ချောင်းနှင့်ကားတစ်စီးဖြင့်မောင်းနှင်မှုကြောင့်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ သားကောင်ကိုတရားရုံးမှာဘယ်တော့မှမပြတဲ့အတွက်ဒီကိစ္စကိုပယ်ချခဲ့
•သူသည်မြေအောက်ရက်ပ် 'Cage' မှစတိုင်နှင့်စာသားကိုကူးယူသည်ဟုစွပ်စွဲခံခဲ့ရသည်။
•သူဟာသူ့အမေအပါအ ၀ င် 'အစစ်အမှန်ပါးလွှာသောရိပ်' ကိုသူနှင့်စော်ကားခဲ့သူများနှင့်အတူပြtroubleနာရှိခဲ့သည်။ သူ့အမေကဒေါ်လာ ၁၀ သန်းဖြင့်တရားစွဲခဲ့သော်လည်းဒေါ်လာ ၁၆၀၀ သာရရှိခဲ့သည်။
မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ကို 'Just lost it' နှင့်၎င်း၏ဗီဒီယိုတွင်ရိုသေလေးစားခြင်းမရှိသောကြောင့်သူကဆန့်ကျင်ခဲ့သည်။
•နောက်တစ်နေ့တွင်သူသည်သူ၏ဇနီးကင်အားနမ်းခြင်းအတွက် Bouncer ဂျွန်ဂရေရေးရာအားစော်ကားမှုဖြင့်အဖမ်းခံခဲ့ရသည်။
• Eminem ၏ဇနီးကင်သည်သူမ၏လက်ကောက်ဝတ်များကိုဖြတ်တောက်။ မိမိကိုယ်ကိုသတ်သေရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးအသရေဖျက်မှုအတွက်တရားစွဲခဲ့သည်။
• Ontario ရှေ့နေချုပ်ဖြစ်သော Toronto's Skydome ရှိ M & M ၏ပြပွဲကိုဖျက်သိမ်းလိုက်သည်
•အထွေထွေဂျင်မ်ဖလာဟတ်က 'ဒီနေရာကိုလာပြီးအမျိုးသမီးတွေအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုကိုထောက်ခံအားပေးတဲ့ဘယ်သူ့ကိုမှကနေဒါကိုလာချင်တာမဟုတ်ဘူး' လို့ပြောခဲ့တယ်
• Deinngelo Bailey သည်သန့်ရှင်းရေး ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ဖြစ်သူ Eminem ကိုသူ၏ Brain Damage တွင်မှောင်မိုက်သောအလင်းရောင်ဖြင့်ပုံဖော်နေသည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သောကြောင့်သူသည်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
•သူသည် ၂၀၀၁ ခုနှစ်၊ ဇွန်လတွင် Psychopathic မှတ်တမ်း ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး နှင့်စကားများရန်ဖြစ်ခဲ့ချိန်တွင်လက်နက်စွဲချက်များအတွက်အမှုဖွင့်ခဲ့သည်။
• Jacques Loussier သည် Kill You ဟူသောလမ်းကြောင်းအတွက်အသုံးပြုခဲ့သော Pulsiion မှသူ၏စည်းချက်ကိုကူးယူခဲ့သည့်အတွက် Eminem နှင့် Dr. Dre တို့အားဒေါ်လာ ၁၀ သန်းတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ အမှုအားနောက်ပိုင်းတွင်ဖြေရှင်းခဲ့သည်
• Eminem ကုမ္ပဏီ Eight Mile Style သည် ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် Apple Inc. နှင့် Aftermath Entertainment ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ Eminem ၏သီချင်း ၉၃ ပုဒ်ကို iTune တွင်ရောင်းချရန်သဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သည်။ Aftermath အနေဖြင့် Eminem ၏ဂီတကိုကုမ္ပဏီအမျိုးမျိုးသို့လိုင်စင်ချပေးသည့်အတွက်မူပိုင်ခွင့် ၅၀% ကိုလည်းတရားစွဲခဲ့သည်။
Hotstylz သည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် Eminem အား ၂၅ စက္ကန့်နမူနာကို အသုံးပြု၍ ဒေါ်လာ ၈ သန်းဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
ရေးရာ / မိန်းကလေး Kendra ကျောက်စိမ်း
Kimberly Scott (၁၉၈၉-၂၀၀၆)
Brittany Andrews (၂၀၀၁)
Mariah Carey (၂၀၀၂)
ကာရင် Steffans (2003)
ဇနီး / အိမ်ထောင်ဖက် Kimberly Anne Scott (၁၉၉၉ ခုနှစ်၊ div ။ ၂၀၀၁၊ ၂၀၀၆၊ div ။ ၂၀၀၆)
Net Worth ဒေါ်လာသန်း ၂၀၀
လုံးချင်းအိမ် မီချီဂန် Mansion (ဒေါ်လာ ၄.၇၅ သန်း)
Hummer H2၊ Cadillac၊ Ford Mustang၊ Lexus LFA, Lamborghin နှင့် Rolls Royce တို့ဖြစ်သည်
လိမ့်နေသောကြောက်တုံး အပေါ်နံပါတ် 83 မှာ Eminem အဆင့် အားလုံး Times ရဲ့ 100 အကြီးမြတ်ဆုံးအနုပညာရှင် စာရင်းပြုစုပြီးသူ့ကိုဟစ်ဟော့ပ်ရဲ့ဘုရင်လို့ခေါ်တယ်။
သူ၏အယ်လ်ဘမ်ဆယ်ခုသည် Billboard 200 တွင်ရှိပြီးကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအယ်လ်ဘမ် ၁၇၂ သန်းကိုအတူတကွရောင်းချခဲ့သည်။ သူသည်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးဟစ်ဟော့ပ်အနုပညာရှင်ဖြစ်သည်။
Eminem သည် Grammy ဆုကိုရရှိခဲ့သည် အကောင်းဆုံးရက်ပ်အယ်လ်ဘမ် ၁၉၉၉ တွင် 'The Marshall Mathers LP' (၂၀၀၀) နှင့် 'Eminem Show' (၂၀၀၂) တွင်အောက်ပါအယ်လ်ဘမ်နှစ်ခုအတွက်လည်းပါဝင်သည်။
လွှတ်ပြီးနောက် နောက်တဖန် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်သူသည်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက်တွင်သူ၏အယ်လ်ဘမ်ကိုထုတ်ဝေခဲ့သည် relapse (2009) နှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး (2010) ။ ပြန်လာပြီ ယခုနှစ်အရောင်းရဆုံးအယ်လ်ဘမ်နှင့်ဖြစ်ခဲ့သည် Eminem ပြပွဲ။
'မာရှယ် Mathers LP 2″ Eminem ရဲ့တက်ထည့်သွင်းခြင်း 'အကောင်းဆုံး Rap အယ်လ်ဘမ်' အပါအဝင်နှစ်ခု Grammys အနိုင်ရရှိခဲ့သည် ဂရမ်မီ 15 ဆုစုစုပေါင်းရန်။
Eminem သည်အကယ်ဒမီဆုကိုပထမဆုရရှိသည့်ပထမဆုံးရက်ပ်အနုပညာရှင်ဖြစ်လာခဲ့သည် အကောင်းဆုံးမူရင်းသီချင်း “ 8 Mile” ဆိုတဲ့ hip-hop ရုပ်ရှင်အတွက်သူ့ရဲ့“ Lose Yourself” သီချင်းအတွက်။
Eminem ၏အမေသည်အသက် ၁၄ နှစ်တွင်ဘရုစ် (M & M ၏ဖခင်) နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဒက်ဘီသည်အသက် ၁၇ နှစ်တွင် ၇၃ နာရီလုပ်အားဖြင့်သေဆုံးသည်။
Eminem နှင့် Debby သည်ငယ်စဉ်ကမစ်ဆူရီနှင့်မီချီဂန်တို့အကြားအပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြသည်။ သူတို့ဟာဘယ်နေရာမှာတစ်နှစ်ကျော်ကြာတည်ရှိပြီးဆွေမျိုးတွေနဲ့အတူနေခဲ့ကြရတယ်။
Eminem ကိုပျော်ရွှင်သောကလေးတစ်ယောက်အဖြစ်မှတ်မိပြီးအထီးကျန်သူဟုလည်းပြောကြသည်။ သူကကျောင်းနှင့်ရပ်ကွက်အတွင်းအနိုင်ကျင့်ခဲ့သည်။ သူ De'Angelo Bailey အားဖြင့်အကြီးအကျယ်ဒဏ်ရာရပြီးတာနဲ့။ ဒက်ဘီသည်ကျောင်းကိုတရားစွဲဆိုခဲ့သော်လည်းအမှုကိုပယ်ချခဲ့သည်။
Eminem သည်လူမည်းလူငယ်များကရိုက်နှက်ခံခဲ့ရသည့်ဒက်ထရွိုက်မြို့၏လူမည်းရပ်ကွက်ရှိလူလတ်တန်းစားလူနည်းစုတွင်နေထိုင်သည်။ သူတို့ကအဲဒီမှာအိမ်ဖြူသုံးယောက်ထဲကတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ သူသည် ၉ နှစ်အရွယ်တွင်ရက်ပေါင်းများစွာမေ့မြောနေခဲ့သည်။
Eminem သည်ဇာတ်လမ်းပြောခြင်းကိုဂီတထက်ပိုပြီးနှစ်သက်ပြီးရုပ်ပြအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ချင်ခဲ့သည်။ ဒက်ဘီ၏အစ်ကိုဝက် Ronnie Polkinghorn က Eminem ၏ CD ကိုလက်ဆောင်အဖြစ်ပေးခဲ့သည်။
Ronnie Polkinghorn သည်နောက်ပိုင်းတွင်သူ၏ဂီတဆရာဖြစ်လာခဲ့သည်။ သူသည် ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်သည့်အချိန်၌သူသည်စကားမပြောခဲ့ပါ၊ သူသည်သူ၏အသုဘကိုမတက်ရောက်ခဲ့ပါ။
Eminem သည်ငယ်စဉ်ကတည်းကတည်ငြိမ်မှုများစွာမရရှိခဲ့ဘဲလူမှုရေးလုပ်သားကသူ့အမေအား“ သံသယဖြစ်ဖွယ်နှင့်အကြောက်လွန်ရောဂါ” အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ Kimberly Scott ကိုသူမအိမ်တွင်နေခွင့်ပေးခဲ့သည်။
Mathew Mathers သည်ကျောင်းပျက်ကွက်ခြင်းနှင့်အဆင့်နိမ့်ခြင်းကြောင့် ၉ နှစ်မြောက်အဆင့်တွင်သုံးနှစ်ရှိခဲ့သည်။ သူကတတိယနှစ်ပြီးနောက်ကျဆင်းသွားသည်။
သူသည်အိမ်ထောင်စုများကိုထောက်ပံ့ရန်အလုပ်များစွာယူခဲ့ပြီး၊ သူသည်ဂီတကိုတီးခတ်နိုင်ပြီးသူမ Bingo ကိုတီးခတ်ရန်ဝေးသည့်အချိန်တွင်သီချင်းများကိုရေးသားလိမ့်မည်။
Eminem သည်အသက် ၁၄ နှစ်အရွယ်တွင်အိမ်နီးချင်းများနှင့်အတူသူငယ်ချင်းများနှင့်အတူလမ်းများပေါ်တွင်စတင်အလူးအလဲခံခဲ့ရသည်။ သူတို့ကရက်ပ်တိုက်ပွဲတွေကိုလေ့ကျင့်ဖို့ကျောင်းရဲ့နေ့လယ်စာခန်းထဲမှာခိုးကြောင်ခိုးဝှက်လိမ့်မယ်။
သူကဒါခေါ်အပေါ်ပွင့်လင်း mic ရက်ပ်စစ်ပွဲများသို့တက်ရောက်လေ့ရှိတယ် သုညမြေ ဒက်ထရွိုက်၏။
လူဖြူကောင်သည်အမည်းရောင်ရပ်ကွက်တွင်ကြီးပြင်းရသလောက်ဒုက္ခရောက်သကဲ့သို့သူ၏အပြုအမူကိုလည်းသူထင်မြင်ခဲ့သည်။ လူဖြူလူမည်းတွေရဲ့အမျိုးအစားထဲမှာလုပ်ဖို့ရုန်းကန်နေရတဲ့လူဖြူ။ မြေအောက်လူအစုအဝေးသော်လည်းသူ၏ဂီတကြိုက်တယ်။
Eminem ၏ပထမဆုံးအယ်လ်ဘမ်ကို disc jockeys များကလက်ခံခြင်းမရှိသဖြင့်သူရရှိသောတုံ့ပြန်ချက်မှာ - 'ဘာလို့ Rock n Roll သို့မသွားတာလဲ' တကယ်တော့ဒါက Eminem ကိုသူ့ရဲ့စတိုင်ကိုနည်းနည်းလေးပြောင်းပြီးဒေါသထွက်စေတဲ့အပြင်ပိုပြီးလွတ်လပ်တဲ့သီချင်းစာသားတွေရေးဖို့လုပ်ခဲ့တယ်။
Mathew Mathers လက်ဝဲကျန်ရစ်သည်။
ကင်မ်နှင့်သူသည်ရာဇ ၀ တ်မှုများသောဒေသတွင်နေထိုင်ခဲ့ပြီးအကြိမ်ကြိမ်လုယက်ခံခဲ့ရသည်။ Gilbert's Lodge ဟုခေါ်သောဒေသခံစားသောက်ဆိုင်အတွက် Eminem သည်ပန်းကန်ဆေးခြင်းနှင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သူသည် Hailie မွေးပြီးနောက်တွင်သူသည်တစ်ပတ်လျှင်နာရီ ၆၀ အလုပ်လုပ်နေသောမော်ဒယ်ဝန်ထမ်းတစ် ဦး အဖြစ်ဖော်ပြခံခဲ့ရသည်။
သူဟာခရစ်စမတ်မတိုင်မီကပစ်ခတ်ခံခဲ့ရတဲ့အချိန်မှာခရစ်စမတ်မတိုင်ခင်ငါးရက်အလိုမှာဟေးလီရဲ့မွေးနေ့ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ငါသူမကိုတစ်ခုခုရဖို့ဒေါ်လာလေးဆယ်လောက်ရတယ်။ ”
သူ၏ပထမ ဦး ဆုံးအယ်လ်ဘမ်၏ဖြန့်ချိပြီးနောက် အဆုံးမဲ့ သူသည်မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုသို့ ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်။ သူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပြproblemsနာများနှင့်အတူသတ်သေရန်ကြိုးပမ်းမှုဖြင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
Gilbert ၏ Lodge မှနောက်ဆုံးအကြိမ်ပစ်ခတ်ခြင်းခံရပြီးနောက်ဇနီးကင်နှင့်အတူသူသည်သူ၏မိခင်နှင့်အတူနေခဲ့သည် မိုဘိုင်းအိမ် ။
Slim Shady သည်သူ၏ alter ego ဖြစ်ပြီးသူ၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၁၉၉၇ တွင်သူ၏အိမ်မှနှင်ထုတ်ခံရပြီးနောက် Eminem သည်နယူးယောက်ရှိ Rap အိုလံပစ်တွင်ရက်ပ်စစ်ပွဲသို့သွားခဲ့သည်။ သူကဒုတိယနေရာနှင့်ဝန်ထမ်းများရရှိခဲ့သည် Interscope မှတ်တမ်းများ သူ၏ဂီတကို Dr. Dre သို့ယူဆောင်လာသည့်ပရိသတ်တွင်ပါ ၀ င်သည်။
သူ Eminem ရဲ့ဂီတကိုနားထောင်အဖြစ်မကြာမီဒေါက်တာ Dre 'သူ့ကိုရှာပါရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ အခု!” သူ့အဖွဲ့သည်အဖြူရောင်ရက်ပ်ငှားရန်တွန့်ဆုတ်သော်လည်းဒေါက်တာ Dre ကဤသို့ဆက်ပြောသည် -“ မင်းကခရမ်းရောင်ဆိုရင်ငါ fuck ဆိုတဲ့မပေးဘူး၊ သင်ကန်နိုင်လျှင်ငါနှင့်သင်အလုပ်လုပ်သည်။ '
ယူနိုက်တက်စတိတ်လျှို့ဝှက်ဝန်ဆောင်မှုဌာနက Eminem သည်သမ္မတအားသတ်ရန်ခြိမ်းခြောက်သည့်အချက်ကိုစုံစမ်းနေကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အကြောင်းရင်းမှာ Eminem ၏သီချင်းသည်“ ငါတို့ကအမေရိကန်သီချင်းစာသားများ” ဖြစ်သည်။ 'ကျနော်တို့အမေရိကန်တွေအဖြစ်' ('Fuck ပိုက်ဆံ / ငါသေပြီသမ္မတအဘို့အ rap ကြဘူး / ငါမဟုတ်ဘဲသမ္မတပြောကြားခဲ့သည်ဘယ်တော့မှရဲ့, သမ္မတ ဦး သိန်းစိန်သေပြီမြင်ချင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါထုံးတမ်းစဉ်လာထား') ။
သမ္မတဘုရ်ှ၏ပြန်လည်ရွေးကောက်ခံအပြီးတွင် 'Mosh' သီချင်း၏ဗီဒီယိုအဆုံးသတ်သွားသည်။
Eminem သည်သူ၏အယ်လ်ဘမ်အတွက်မှတ်တမ်းတင်ထားသည် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး သမိုင်းတွင်အရောင်းရဆုံးအယ်လ်ဘမ်ဖြစ်ရန်! ၎င်းသည်ယူအက်စ်တွင်ကူးယူခြင်းပေါင်း ၃ သန်းကျော်ရောင်းချခဲ့သည်။
နှစ်ခုနှင့်အတူ Eminem တစ်ခုတည်းသောရက်ပ်ဖြစ်ပါတယ် စိန်အသိအမှတ်ပြု အယ်လ်ဘမ်များ။
Eminem သည် Facebook တွင်“ အကြိုက်” သန်း ၆၀ ရရှိသည် Lady Gaga, Justin Bieber, Rihanna နှင့် Michael Jackson
Eminem ရဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိ ငါလမ်းစဉ် သူ၏ကျော်ကြားမှုအတွက်ရုန်းကန်နေရခြင်းနှင့်သူ၏ကိုယ်ပိုင်သီချင်းများ၏မူလမှတ်စုများပါ ၀ င်သည့်သူ၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝကိုဖော်ပြသည်။
Eminem သည်အိပ်ဆေးသောက်သည့်အကျင့်စွဲနေသည် Vicodin, Ambien နှင့် Valium ။ ၁၆ နာရီကြာရုပ်ရှင်ပြောင်းချိန်၌သူသည်ပထမဆုံး Ambien ကိုရရှိခဲ့သည် ၈ မိုင် တစ်ယောက်ယောက်ကသူ့ကို Eminem အိပ်မပျော်တဲ့အချိန်မှာအိပ်ဖို့တက်ဘလက်ကိုယူခိုင်းတယ်။
သူသည်မူးယစ်ဆေးစွဲမှုကြောင့် ၁၀၀ ကီလိုဂရမ် (ပေါင် ၂၃၀) အထိအရှိန်ပြင်းစွာအမြန်အစာအမြောက်အမြားရရှိခဲ့သည်။
သူအမြဲတမ်းရေးနေတယ်။ စာသားအတိုင်း! အမြဲတမ်းနီးပါး!
သူသည်ကုန်သည်တစ် ဦး ထံမှမူးယစ်ဆေးဝါးများကိုဝယ်ယူပြီးနောက်သူမသည်သူ၏ရေချိုးခန်း၌ပြိုကျခဲ့သည်။ သူကဆေးရုံကိုခေါ်သွားပြီးဆရာဝန်တွေကသူဟာအိတ်လေးခုနဲ့ညီမျှတဲ့ဆေးတွေဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ် ဘိန်းဖြူ နှင့်သာ2နာရီကွာသေခြင်းမှဖြစ်ခဲ့သည်။
သူသည်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းအစည်းအဝေးများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးကင်းစင်ရန်လာရောက်ခဲ့သော်လည်းကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးရန်ငြီးငွေ့ခဲ့သည်။ သူသည်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်Aprilပြီလတွင်သမ္မာသတိရှိခဲ့သည်။
အရ Nielsen SoundScane သူသည် ၂၀၀၀-၂၀၁၀ ဆယ်စုနှစ်အတွင်းအရောင်းရဆုံးပန်းချီဆရာဖြစ်ခဲ့သည်။
သူကလိင်တူချင်းလက်ထပ်ထိမ်းမြားမှုနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခံရသောအခါ “ လူနှစ်ယောက်ကတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်ချစ်ရင်ငါဘာလုပ်မယ်ထင်သလဲ။ လူတိုင်းကသူတို့လိုချင်ရင်ညီတူညီမျှစိတ်ဆင်းရဲစရာအခွင့်အရေးရှိသင့်တယ်လို့ထင်တယ်။
“ သင်လိမ်ပြောတာကိုနှစ်သက်ပါ” သည် ၁၁ x ပလက်တီနမ်ဖြစ်ပြီး၊ “ မကြောက်ကြနှင့်” က ၁၀ x ပလက်တီနမ်ဖြစ်သည်။ စိန်။
Eminem သည် Audi အားသူ၏“ Loose Yourself” သီချင်းကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့်တရားစွဲခဲ့သည် ၂၀၁၂ Audi ၆ ရန်
pawan kalyan ၏အသက်ကဘာလဲ
lal bahadur shastri ဇနီးအမည်
မွေး Neha dhupia နေ့စွဲ
kartik နှင့် naira အစစ်အမှန်အမည်